थाईल्याण्ड अद्भुत समुद्री किनार, चाखलाग्दो इतिहास, उत्सव समारोह, र भव्य परिदृश्यको लागि एक सुन्दर देश घर हो। वर्षौंदेखि, यो एक्स्पेटहरूको लागि चुम्बक बनेको छ जो कम लागत र उच्च जीवनस्तरको साथ एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशमा बस्न चाहन्छ।
थाईल्याण्डमा अनुभव गर्न सक्ने सुन्दर दृश्य र रोमाञ्चक साहसिक कार्यहरू भन्दा बढी, क्यासिनोमा आफ्नो भाग्य प्रयोग गर्न चाहनेहरूको बीचमा देश पनि मनपर्दछ।
शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
थाईल्याण्डमा क्यासिनो छन्?
बैk्ककमा त्यहाँ क्यासिनोहरू छैनन्, र वास्तवमा सम्पूर्ण देशसँग कुनै भूमि-आधारित क्यासिनो छैन किनकि यो थाईलैंडमा जूवा खेल्न अवैध छ। भूमि-आधारित क्यासिनोहरूको प्रतिबन्ध बीई २2478 ((१ 1935 XNUMX) मा जुवा ऐन पारित भएपछि आए। उक्त कानून अन्तर्गत, केवल घोडा दौड शर्त र राष्ट्रिय चिठ्ठा जुवाको स्वीकार्य प्रकार हो। मौद्रिक विनिमय बिना नै क्यासिनो खेलहरू खेल्नुलाई स्थानीय पुलिसले जुवा ठान्न सक्छ।
कानुनले यो शर्ता पनि तोकेको छ कि कुनै अवैध रूपमा जुवा खेल्नेहरू पक्राऊ परेकालाई जरिवाना र जेल हुन सक्छ। तर सत्यलाई भन, भूमिगत क्यासिनोहरू अझै सञ्चालनमा छन्। देश भ्रमण गर्दा, पर्यटकहरूले निजी कार्यालयहरूको छेउछाउबाट अन्त्येष्टिमा क्यासिनो खेल खेल्ने स्थानीयहरूको ठूलो प्रतिशत देख्नेछन्।
के थाईल्याण्डमा क्यासिनो कानूनी छन्?
उल्लेख गरिए अनुसार थाइल्याण्डमा क्यासिनो अवैध छन्। त्यहाँ अझै छन्, यद्यपि, अनलाइन क्यासिनोहरू जुन स्थानीयले खेल्न सक्छन्। धेरै थाई स्थानीयहरू जुवा खेलाडीहरू हुन्, उनीहरूले खेलेका क्यासिनो खेलहरू सामान्य कार्ड र टेबल खेलहरू होइनन् जुन युरोपियनहरू परिचित छन्। वास्तबमा, Baccarat, रूले, र Craps स्थानीय betters बीच लोकप्रिय छैन।
थाइल्याण्डमा यो सामान्य ज्ञान हो कि भूमिगत क्यासिनोहरू बगैंचामा छन् किनकि धेरै स्थानीय मानिसहरूले तिनीहरूको अवैध कार्यहरूको संरक्षण गर्छन्। अवैध क्यासिनोमा शर्त जोखिमको साथ आउँदछ। थाई सट्टेबाजहरू खेलाडीहरूबाट ठूलो जीत रोक्नको लागि कुख्यात छन्। लेनदेन अवैध रूप मा शुरू भएकोले, यी खेलाडी संग आफ्नो घाटा स्वीकार गर्न को लागी बाहेक कुनै विकल्प छैन। तिनीहरूले यी धोकादायक सट्टेबाजहरूलाई अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरू चार्ज, जरिवाना र जेल हुने जोखिम पनि चलाउँछन्।
देशले थाईल्याण्ड सिभिल र कमर्शियल कोड (सेक्सन 853 855 र XNUMX XNUMX) लाई पनि लगाएको छ कि जुवा गतिविधिबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि debtण स्वीकार्य छैन।
प्रत्यक्ष क्यासिनो थाईल्याण्ड FAQ:
के थाई बासिन्दाहरूलाई अनलाइन प्रत्यक्ष क्यासिनोमा खेल्न अनुमति छ?
अन्य धेरै दक्षिण एशियाई देशहरू जस्तै थाईल्याण्डले आधिकारिक रूपमा अधिकांश जुवा गतिविधिहरू प्रतिबन्ध लगाउँदछ। र, कडा जुवा कानून सहित अन्य धेरै देशहरूमा जस्तै, अभ्यास निकायको निकायको निर्णय भन्दा परेको छ। थाई कानूनले केवल घोडा दौड शर्त अनुमति दिन्छ र आधिकारिक राज्य लॉटरी, कुनै पनि वैकल्पिक जुवा अवैध छ।
कानुनी प्रतिबन्धको बाबजुद, यो अनुमान गरिएको छ कि लगभग of०% वयस्क नागरिकहरू कुनै प्रकारको जुवामा भाग लिन्छन्। ककफाइटहरू र बुल्फफाइट्समा बेट लगाउनु राष्ट्रिय परम्पराको एक हिस्सा हो, तर अन्य धेरै प्रकारहरू पनि लोकप्रिय छन्।
जब यो अनलाइन जुवामा आउँदछ, थाईले विदेशी क्यासिनोहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् जसले थाईल्यान्डका खेलाडीहरू स्वीकार गर्छन्। यद्यपि यो आधिकारिक रूपमा अवैध छ, अनलाइन जुवाले अधिकारीहरुसंग धेरै कम समस्याहरु सामना गर्दछ, किनकि उनीहरुको मुख्य ध्यान शारीरिक जुवा घाउमा छ।
थाई खेलाडीहरूको लागि राम्रो भुक्तान विधिहरू के हुन्?
अनलाइन जुआ निषेध गर्ने देशहरूमा बस्ने खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त भुक्तान विधिहरू सामान्यतया e-वालेटहरू हुन्। इ-वालेटहरू छिटो, सुरक्षित छन् र प्रयोगकर्ताको पहिचानको सम्बन्धमा धेरै जानकारीहरू छोड्दैनन्। विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय ई-वालेटहरू पेपैल, नेटलर, स्क्रिल, र थाइल्याण्डमा ट्रु मनी (मार्केट लिडर), युनिट्री (गेमि payments भुक्तानीमा विशेष) र पेसबुई पनि छन्।
के अनलाइन जुवा साइटहरूले सामान्यतया थाइल्यान्डबाट खेलाडीहरू स्वीकार गर्दछन्?
त्यहाँ वास्तवमा धेरै अनलाइन क्यासिनोहरू छन् जुन खुशीसाथ थाई खेलाडीहरू होस्ट गर्छन्। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये धेरैले थाई भाषा सेवा प्रदान गर्छन् वा तिनीहरूको मुद्रा स्वीकार गर्दछन् - थाई बाह्ट। विदेशी अनलाइन क्यासिनो राष्ट्रिय भन्दा धेरै राम्रो विकल्प हो, किनकि पछि अधिकारीहरू द्वारा बन्द गर्न सकिन्छ। दर्ता गर्नको लागि वेबसाइट छनौट गर्नु अघि क्यासिनो समीक्षा जाँच गर्नुहोस्।
के म तुरून्त एक अनलाइन क्यासिनोमा मेरो जीत फिर्ता लिन सक्छु?
निकासी तपाईंको भुक्तान विधिमा निर्भर गर्दछ, तर निक्षेपहरू भन्दा छिटो हुँदैन। एक पटक तपाईले कुनै खास क्यासिनोको साथ दर्ता गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो पैसा आँखा झिम्काएर जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र खेल सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं आफ्नो पैसा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुहुन्छ, सामान्यतया यो अपरेशन पूरा गर्न केहि दिन लाग्छ। यो तपाईं चिन्तित हुनु हुँदैन किनकि यो सामान्य प्रक्रिया हो र तपाईंको पैसा सुरक्षित हुनेछ।
शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 9, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 थाईल्याण्डमा क्यासिनो छन्?
3 के थाईल्याण्डमा क्यासिनो कानूनी छन्?
4 प्रत्यक्ष क्यासिनो थाईल्याण्ड FAQ:
4.1 के थाई बासिन्दाहरूलाई अनलाइन प्रत्यक्ष क्यासिनोमा खेल्न अनुमति छ?
4.2 थाई खेलाडीहरूको लागि राम्रो भुक्तान विधिहरू के हुन्?
4.3 के अनलाइन जुवा साइटहरूले सामान्यतया थाइल्यान्डबाट खेलाडीहरू स्वीकार गर्दछन्?
4.4 के म तुरून्त एक अनलाइन क्यासिनोमा मेरो जीत फिर्ता लिन सक्छु?
भेगास फ्री स्पिनहरूको स्लट
शीर्ष १० थाई अनलाइन ...